Bangiga Adduunka oo ugu deeqay Soomaaliya lacag dhan 445 Malyan oo Dollar - Jowhar somali news leader
By Mahad	 On Jun 30, 2021
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Dr Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo Wakiilka Soomaaliya ee Bangiga Adduunka Kristina Svensson ayaa Muqdisho ku kala saxiixday 445 Milyan oo dollar oo Bangiga adduunku ugu deeqay Soomaaliya si loogu fuliyo mashaariic horumarineed.
Wasiirka ayaa sidookale kala hadlay Kristina Svensson maamulaha Bangiga Adduunka ee Soomaaliya oo ay wehliso Maamula Hey’adda IFCAfrica ee Soomaaliya Aamina Arif, waxaana looga haday dib u habeynta nidaamka Maaliyadda.
“Waxa aan maanta xarunta Wasaaradda Maaliyadda ku soo dhaweeyay Kristina_Svensson oo ah Wakiilka Soomaaliya ee Bangiga Adduunka, waxa aan kala saxiixanay heshiis gaaraya $445 Milyan oo Dollar oo ah Mashruucyo kala duwan oo Deeq ah, isla markaana lagu horumarinayo Soomaaliya, tan waxa ay caddeyn u tahay sida adduunku inoogu kal soonaaday tan iyo markii aan fulinay dhamaan shuruudihii deyn cafinta”. Ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda.
Wasiir Beyle ayaa xusay in shirka uu la yeeshay Maamulaha Bangiga Adduunka uu ku soo idlaaday si guul ah oo wax badan ay isla meel dhigeen.
Afghans who worked for France get asylum – and unleash an exodus